Goorma ayaa La Gebze Haydarpaşa Line-ka Hoose ee Furitaanka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGoorma ayaa Gebze Haydarpaşa Khadka Furan Furan
28 / 03 / 2016 34 Istanbul, Tareenka Tareenka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, TURKEY
Khadadka tareenka ee Gebze-Haydarpaşa waxaa la furi doonaa goorta: Dib-u-hagaajinta ee 2013 la xiray wadada tareenka ee Gebze-Haydarpaşa, inkasta oo waqtigu soo dhexgalay illaa iyo hadda, taasoo muujineysa in Guddoomiyaha Felicity Party Gebze Madaxweynaha Necati Korkmaz, "Gebze dolmuş waa nalaga saaray," ayuu yidhi.
Xisbiga Felicity Gebze Necati Korkmaz, Madaxweynaha Degmada Çayırova Yusuf Aksu, Gudoomiyaha Degmada Darıca Selim Çetinkaya iyo Madaxweynaha Degmada Dilovası Mustafa Türel waxay go’aansadeen inay ku kulmaan degmo bil walba si wax looga qabto dhibaatooyinka waaweyn ee gobolka. Kulankoodii ugu horreeyay waxaa martigaliyay madaxweynaha degmada Gebze Necati Korkmaz. Mas'uuliyiinta degmada ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee khadka tareenka ee Gebze-Haydarpaşa, kaas oo dhibaato guud ku leh dhammaan afarta degmo, kuwaasoo duullimaadyadoodii la joojiyay.
Duullimaadyada 'Yetkililer 2013'te' way joogsadeen, shaqada dib-u-cusboonaysiinta ayaa la bilaabay, ayaa la sheegay in la furo 2014'te, khadka tareenka ee Gebze-Haydarpaşa wuxuu sii joogay saraakiisha 2015'e, inkasta oo sanadka 2016, inkasta oo aan wali caddayn goorta. Awood la’aanta furitaanka khadka tareenka ee Gebze-Haydarpaşa oo ay isticmaaleen muwaadiniinteena ku fadhiya Gebze kana shaqeeya degmooyinka kala duwan ee Istanbul waxay kordhiyeen ku tiirsanaanta dadka ee dolmuş. Xaqiiqda ah in muwaaddiniinta ku nool Gebze, Çayırova, Darıca iyo Dilovas at ay ku sugan yihiin meel ku-meelgaar ah ayaa u rogaya dhibaato aan loo dulqaadan karin muwaaddinka gaar ahaan inta lagu guda jiro safaro gaagaaban oo ku tagaya Istanbul. Dadka gobolkayagu waxay leeyihiin laba nooc oo dhibaatooyin ah inta ay aroorta arooraan oo ay shaqada ka soo noqdaan fiidnimadii.
Kuwa ku sameeya gaadiidka tareenka raaca ma la kulmin dhibaatooyinka ugu yaraan marka ay tagayaan Pendik, Kartal, Maltepe iyo Kadıköy. Amni darri, oo ka dhalatay xiritaanka khadka magaalada, nasiibdarro waxay horseedday in la kordhiyo waqtiga taraafikada. Natiijo ahaan, waxaa la ogyahay in khadka tareenka ee magaalada ku yaal uu bixiyo gargaar aad u weyn yareynta dhibaatooyinka gaadiidka. Khadkan waa in lagu soo daraa oo keliya Istanbul laakiin sidoo kale lagu xiriirin waddooyinka Izmit iyo Adapazari iyo xoojinta isku xirka gobolka habkan. Inta badan dadka ayaa ka faa'iideysan doona mashruucan. Dib-u-dhigga furitaanka laba jeer, waxaan fahamsan nahay inay jiraan dhowr guuldarrooyin aan loo meel dayin oo fulinta mashruuca.
Waxay ku xiran tahay mas'uuliyiinta inay hubiyaan in mashruucan la soo gabagabeeyo sida ugu dhaqsaha badan; si kastaba ha noqotee, mashruucu waa mashruuc ka gudbay danaha xisbiyada siyaasadeed iyo ku-xigeennada gobollada ee mucaaradka iyo awoodda. Si kastaba ha noqotee, mashaariicda noocan ah waxay daba socdaan oo ay soo gabagabeeyaan siyaasiyiin ka soo jeeda siyaasiyiinta gobolka ka taliya, laakiin ma aysan dhicin Waxaan u maleynayaa in mashruucan uu ka soo baxay danaha qareenadeenna. Xisbiga xukunka haya ayaa ku dhacey dhammaystirka mashruucan, halka xisbiyada mucaaradka ee baarlamaanka ay ku guuldareysteen inay soo bandhigaan tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah fulinta mashruucan sida ugu dhaqsaha badan. Mashruucan, oo fududeyn doona nolol maalmeedka dadka shaqo taga isagoo masaafo dhan afartan iyo konton kiiloomitir u keenaya rootiga guryaha, ayaa dalbanaya dhammaystirka mashruucan isaga oo ku hadlaya magaca dadkayaga sida ugu dhaqsaha badan En saying Necati Korkmaz ayaa soo jiidatay dareenka shacabka.
Gebze-Haydarpaşa Soo Saarista Qadka Saboolnimada ee Suuqa Soodhaweynta Bilow Sanadkaan
Gebze Haydarpaşa tareenka ayaa u socdaalay 2015
qadka tareenada magaalada
Tika si loo dhiso Museum Museum ee Hicaz
2017de Tram 2023te Subway